मिर्गौला प्रत्या´रोपण सफल भएसंगै प्रधानमन्त्री ओली आज अस्पतालबाट डि´स्चार्ज ! – Butwal Sandesh
मिर्गौला प्रत्या´रोपण सफल भएसंगै प्रधानमन्त्री ओली आज अस्पतालबाट डि´स्चार्ज !
काठमाडौँ — मिर्गौला प्रत्या´रोपणका लागि १२ दिनको अस्पताल बसाइपछि शुक्रबार साँझ प्रधानमन्‍त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालले डि´स्चार्ज गरेको छ । शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओली केहीबेर अघि डि´स्चार्ज भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक तथा मिर्गौला रोग तथा प्रत्या´रोपणा चिकित्सा विभाग प्रमुख प्रा.डा. दिव्या सिंह शाहले विज्ञप्ति मार्फत् प्रधानमन्त्री डि´स्चार्ज भएको जानकारी दिएकी हुन् । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. प्रेमकृष्ण खड्‍गाले शुक्रबार दिउँसो विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै साँझ डि´स्चार्ज हुने जानकारी दिएका थिए।
उनी नियमित फलोअपमा रहनुपर्ने अस्पतालले जनाएको छ। फागुन १९ गते अस्पताल भर्ना भएका ओलीको २१ गते बुधबार मिर्गौला प्रत्या´रोपण गरिएको थियो। उनकी मिर्गौलादाता समीक्षा संग्रौला यसअघि डिस्चार्ज भइसकेकी छन्।
१२ दिन अस्पताल बसेर फर्किएका ओलीले डि´स्चार्ज हुँदा पत्रकारहरूलाई कुनै प्रतिक्रिया भने दिएनन्। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राख्नका लागि आइसोलेसन कक्ष बनाइएको छ। सं´क्रमण नहोस् भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई केही समय छुट्टै राख्न लागिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
यसअघि प्रधानमन्त्रीले भारतको अपोलो अस्पतालमा २०६४ सालमा पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्या´रोपण गराएका थिए। बीचमा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गत भदौंमा स्वास्थ्य उपचारका लागि ओली सिंगापुर पुगेका थिए। उनको त्यहाँ ‘प्लाज्माफेरेसिस’ गरिएको थियो। सिंगापुरको १५ दिन बसाइपछि स्वेदश फर्केका ओली पछिल्लो समय नियमित डायलासिस गराउँदै आएका थिए।